Maxkamada racfaanka oo qaadatay go’aan jawaab u ah eedeyntii hooyo Amran | Caasimada Online
Home Warar Maxkamada racfaanka oo qaadatay go’aan jawaab u ah eedeyntii hooyo Amran
Maxkamada racfaanka oo qaadatay go’aan jawaab u ah eedeyntii hooyo Amran
Muqdisho (Caasimadda Online) – Maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir ayaa gabi ahaanba diiday iney furnaadaan waxa ay ugu yeereen xabsiyada qarsoon ee la sheego in lagu dhaqan celiyo bulshada qeybaheeda kala duwan, waxeyna dadka fareen iney xarumaha dowliga ah kala kaashadaan arrimahaas.
Muuqaal lagu faafiyay baraha bulshada oo uu kasoo muuqday, guddoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir Abshir Cumar Cabdullaahi ayuu ku sheegay inaysan raali ka noqon doonin goob walba oo dadka lagu dhibaateeyo, isla markaana ay waalidiinta uga digayaan iney goobaha dhaqan celinta loogu yeero geeyaan caruurtooda.
Guddoomiyaha ayaa si dadban u weeraray hooyo Amran oo dhowaan dowladda ku eedeysay inay ciidamadeeda ka haystaan gabadheeda Amaal Nuur Cusmaan, oo markii dambe ay dowladda u gacan gelisay dowladda Denmark.
Magaalada Muqdisho waxaa ka furan goobo badan oo la sheego in lagu dhaqan celiyo caruurta iyo dadka aysan waalidkood u arkin iney u dhaqmayaan sida wanaagsan, wuxuuna masuulkaan ka dhawajiyay in goobahaas dadka lagu dhibaateeyo.
Guddoomiye Abshir wuxuu shacabka ugu baaqay iney ku xirnaadaan xabsiyada dagmooyinka iyo kan gobolka, sidoo kalana xabsiga dhexe uu ku haboon yahay in dadka lagu dhaqan celiyo maadaama ay leeyahiin goobo waxbarasho, goobo madadaalo iyo sidoo kale shaqooyin xitaa qofka loo yeeli karo.
Goobahaas waxaa loogu baaqay inay cadeeyaan waxa ay meesha ku hayaan si loola socdo xaaladooda, wuxuuna tusaale usoo qaatay in hadda ka hor maxkamadda la keenay kiis qof lagu dhibaateeyay meel dhaqan celin ah.